Fomba fanaovana labozia: ny toro-hevitra sy ny tetika tsara indrindra | Green Renewable
Fomba fanamboarana labozia
Portillo Alemanina | 22/09/2021 10:00 | fanodinana
Fantatray fa ho an'ny haingon-trano, hevitra labozia no labozia. Indrindra raha manitra izy ireo. Manana endrika haingon-trano manaitra izy ireo ary mifanitsy amin'ny fitambarana maro samy hafa. Azonao atao ny mamadika ilay toerana ho toerana fandraisana olona kokoa ary mamorona fomba mety aminao. Misy olona te hianatra ny fomba fanaovana labozia amin'ny fomba tsotra sy mahomby.
Noho izany dia hanokana ity lahatsoratra ity izahay hilaza aminao tsikelikely ny fomba fanaovana labozia sy ny toetrany.
1 Labozia misy fofona
2 Fomba fanamboarana labozia ao an-trano
3 Fomba fanaovana labozia tsikelikely
Labozia misy fofona
Ny labozia misy fofona dia manana hanitra mafana, izay mahasamihafa ny toerana voaravaka tsara sy trano mafana sy sariaka. Miaraka amin'izy ireo isika dia afaka mamadika ny tontolo iainana rehetra amin'ny toerana mampiala voly sy majika, mampihetsi-po amin'ny fotoana sy toerana hafa. Noho io antony io, ny labozia misy fofona dia nanjary singa iray hafa amin'ny haingon-trano ary fanomezana mahafinaritra indrindra amin'ny Krismasy na amin'ny fotoana hafa amin'ny taona.
Saingy tsy izany ihany: labozia koa dia tandindon'ny fanavaozana, fahazavana ary fanadiovana. Izany no antony ampiasana azy ireo matetika amin'ny fomba amam-panao amin'ny etika isan-karazany eran'izao tontolo izao ka ampiasaina hampiroborobo ny fisaintsainana na hamoronana rivo-piainana manome soso-kevitra sy romantika kokoa. Ho fanampin'izany, arakaraka ny hanitra avy amin'izy ireo, izy ireo koa dia mety hisy fiantraikany amin'ny fahavelomana, ny famotehana, ny fialan-tsasatra na ny fanentanana ao amintsika, ary hanatsara ny fihetsem-po sasany.
Ny tantaran'ny labozia dia nanomboka tamin'ny fiandohan'ny sivilizasiôna voalohany. Manomboka amin'ny labozia romana mankany amin'ny fanamboarana hafa vita amin'ny avo, ny fambolena zavamaniry, na ny egyptiana izay mampiasa sampan'omby na zanak'ondry feno fotaka. Ho an'ireo kolontsaina rehetra ireo, Io no fitaovana lehibe indrindra amin'ny fahazavana ary ampiasaina amin'ny lanonana ara-pivavahana sy sorona koa.
Ny fisiany ho mariky ny Krismasy dia manana tantara an-jatony taona maro koa. Ny labozia dia ampiasaina hialana amin'ny fanahy ratsy ary ho lasa iray amin'ireo singa mahazatra amin'ireo fialantsasatra ireo. Raha ny marina dia misy porofo fa tamin'ny taonjato faha-XNUMX dia napetraka teo ambonin'ny hazo krismasy alemanina ny labozia handravahana ny efitrano.
Nanomboka tamin'ny nahitana solika tamin'ny 1850, ny labozia dia vita amin'ny parafinTaty aoriana, rehefa niseho solitany sy herinaratra tao an-tranonay, dia niova ny zava-drehetra. Toy izany no anaovan'ny labozia grail masina haingon-trano sy manitra kokoa, fa tsy fitaovana fanaovan-jiro fotsiny.
Fomba fanamboarana labozia ao an-trano
Raha mahaliana anao koa ny majika amin'ny labozia, dia efa fantatrao fa misy modely, endrika, habe ary loko isan-karazany an'arivony eny an-tsena. Na izany aza, azo atao ao an-trano ihany koa izy ireo, ary tena asa tanana tsotra sy voalohany izay tonga lafatra ho fanomezana. Andao hojerentsika hoe inona ireo fitaovana ilaina ilaina hianarana ny fanaovana labozia:
Savoka voadio na savoka parafin (Afaka mahita izany ianao any amin'ny magazay asa tanana na amin'ny Internet.) Ny habeny dia miankina amin'ny labozia tianao hatao sy ny habeny.
Loko, ny feon'ny safidinao.
Lasitra iray na maromaro hamolavola ny labozinao.
Toetra manitra. Afaka mampiasa menaka esansiela ianao, fa alao antoka fa manana kalitao ambany indrindra izy ireo raha tsy izany dia tsy hahazo valiny tsara.
Siny misy savoka miempo tehina mpitari-dalana (amidy an-tserasera sy fivarotana manokana ihany koa izy ireo), spatula hazo ary wick (miankina amin'ny labozia tianao hatao ny vola).
Fomba fanaovana labozia tsikelikely
Elaela vao mianatra ny fomba fanaovana labozia misy fofona, saingy tsy sarotra izany. Hamarino fotsiny fa manaraka ireo dingana etsy ambany:
Ny zavatra voalohany tokony hataonao dia ny manafana ny savoka ao anaty lapoaly, amin'ny hafanana antonony na ambany, mandra-piempoany tsara. Ny hevitra tsara dia ny fanaovana azy ao anaty rano fandroana rano (apetraho ao anaty vilany lehibe kokoa ilay fitoeran-javatra miaraka amina savoka) ary afangaro amin'ny spatula.
Avy eo, rehefa nangatsiaka kely ny savoka dia ampio ny fandokoana sakafo sy ny ranomandry vitsivitsy amin'ny tsiro tianao. Tandremo sao diso tafahoatra fa raha tsy izany dia mety ho mahery sy manorisory ny fofona omenao.
Manaraka, tonga ny fotoana handrafetana azy: arotsaho ao anaty lasitra safidinao ny savoka miempo, misy tsiro ary miloko (aloha, aza adino ny manosotra ny ambany sy ny lafin'ny lasitra miaraka amin'ny diloilo mahandro).
dia ampifandraiso amin'ny labozia ny wick ary afatory amin'ny tsorakazo fitarihana ny faran'ny labozia. Hahita lavaka amin'ny tsorakazo ianao amin'izay ahafahanao miditra ao anaty wick ary mampita azy amin'ny faran'ny lasitra. Ny wicks sasany dia tonga miaraka amina fotony fisorohana mora foana ny labozintsika, indrindra raha tiana hapetraka ao anaty kaontenera isika.
Farany, tapaho ny tendron'ny wick, maka antoka fa hamela sombin-javatra eo amboniny hahafahanao mamadika azy tsy misy olana.
Izao no fotoana hamelana ny savoka hangatsiaka, ity dingana ity dia afaka maharitra ora maromaro. Mba hampihenana ny fotoana fiandrasana dia tokony hapetraka amin'ny toerana mangatsiatsiaka sy maizina tsy lavitra ny tara-masoandro izy ireo.
Raha te-hamaha ny labozia ianao (ohatra, azonao atao ihany koa ny misafidy ny hamela azy ireo ao anaty siny fitaratra na siny seramika), avereno ao anaty lasitra izy ireo ary apetaho amin'ny rantsan-tànanao na pensilihazo hanesorana tsikelikely ny rivotra ary ataovy miandalana. avy amin'ny lasitra, manakana ny labozia tsy ho vaky na ho vaky.
Ny fanaovana labozia any an-trano dia tsy mitera-doza matetika, fa tsy maintsy tadidintsika fa mampiasa paraffin, izay vokatra mora mirehitra, rehefa lasa ranoka izy io, hahatratra hafanana be dia be. Noho izany dia ampirisihina hatrany hanaraka ireto fepetra manaraka ireto:
Soso-kevitra ny hanao fonon-tànana sy solomaso miaro.
Aza avela hitandrina ny afo.
Manolo-kevitra ny hampiasa thermometatra ao an-dakozia hanamarinana fa tsy nihoatra ny fetra fandoroana afo isika amin'ny fotoana rehetra.
Raha mirehitra ny savoka, rakofana lamba ny vilany ary vonoy ny lasantsy. Aza asiana rano na inona na inona toe-javatra misy, satria vao mainka handrehitra ny lelafo izany.
Farany, mifikira amin'ny fitaovana nampiasanao labozia. Na izany na tsy izany dia afangaroinao amin'ny sakafo handrahoana azy ireo.
Manantena aho fa amin'ity fampahalalana ity dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny fomba fanaovana labozia tsikelikely ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Tontolo_iainana » fanodinana » Fomba fanamboarana labozia
Angovo azo havaozina sy tsy azo havaozina
Ny tontolo iainana an-dranomasina